Madaxweyne Muuse Biixi oo Berri Salaasada Safar todoba Maalmood qaadan-doona ugu baxaya Dalka Isu Tagga Imaaraadka Carabta+ Heshiiska Saldhiga oo dib loo Fasaxayo....
Monday February 05, 2018 - 21:29:07 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa Maalinta berri oo Salaasa 6-da Bishan, ayaa safar qaadan doona muddo todobaadka ah ugu kicitimaya dalka isu tagga Imaaraadka carabta. Ma jiro War rasmiya oo kasoo baxay Xukuumada.
Hase-yeeshee ilo wareedyo looga qaateen ah oo ka ag dhow Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa shabakada Warbaahinta Xogreebnews.com u sheegay in Madaxweyne Muuse Dawladda Imaaraadka kala soo xaajoonayo Arrimaha Saldhiga Mileteri, iyadoo xogguhuu intaas ku dareen in dhaqaale badan Dawladda imaaraadku soo siin doonto Madaxweynaha cusub.
Wixii faahfaahin ah ee dheeraad ah kala soco warbaahinta Xogreebnews.com.
Madaxweyne Muuse Biixi Mushkiladihii uu Ka Dhaxlay Saaxiibkii Iyo Kuwa Uu Is-dhaxalsiiyey Dalka Siduu Uga Saari-karaa?. Faallo Cabdicasiis Bashiir Nuur